सावधान ! गुगलमा यस्ता ५ कुरा झुकिएर पनि नखोज्नुस, जेल होला – Karnalikhabar
सावधान ! गुगलमा यस्ता ५ कुरा झुकिएर पनि नखोज्नुस, जेल होला
२ अाफ्नाे ब्यक्तीगत बिवरण नखाेज्नुस – गुगल सर्चमा हर सुविधा उपलब्ध हुन्छ हामिले चाहेकाे कुराहरू सजिलै खाेजीगरी त्यसकाे बिषयमा बिविध ज्ञान लिन सक्छाै तर गुगलमा अाफैनै बायाेडाटा बारे सर्च नगर्नुस किनकी गुगलसंग तपाइकाे सम्पुर्ण बिवरण हुन्छ यदी त्याे बिवरण तपाइले हेर्दा कारणवस लिक हुन सक्छ र कसैले तपाइकाे नाममा रहेकाे अाइडीकाे दुरूपयाेग गरी तपाइलार्इ जेलकाे हावा खुवाउन सक्छ । त्यसैले याे कुरामापनि सावधानी अपनाउनुपर्छ ।
५ इमेल अाइडी सर्च नगर्नुस : गुगलमा कहिलेपनि अाफ्नाे ब्यक्तीगत इमेल अाइडी सर्च नगर्नुस त्यसाे गर्दा तपाइकाे एकाउन्ट ह्याक हुन जाने सम्भावना बढी हुन्छ । र तपाइकाे बिवरण लिक हुन सकछ । जसकाे कारण तपाइलार्इ तनाव हुन सक्छ । एजेंसीको सहयोगमा
अघिल्लो - रामकुमार शर्मा र रामचन्द्र झा फेरि माओवादी केन्द्रमा प्रवेश
बाढीले तराईमा फिल्मको व्यापार ठप्प - पछिल्लो